HomeAfaan OromooIbsa ABO – Du’a Calanqootti Raawwatameen Gadda Guddaatu nutti Dhagahama!
Ibsa Gaddaa – Du’a Dargaggoota Calanqoo, Baha Haragee, Oromiyaa.
(Ibsa ABO – Guraandhala 4, 2021)
Iitti dabaluudhan yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessatti ummatni nagaa fi tasgabbii dhabuu qofa utuu hin taane qaamni biyyan bulcha jedhee of waamu (PPn) humna hidhatetti dhimma bahuudhan ummata nagaa bakka hundatti nu deeggaraa, nu filadhaa jechuudhan dararaa akka jiru hubataa jirra. Kana keessatti bakkayyuu lubbuun namaa akka darbaa jiruu fi mirgi namaa dhii- tamaa jiru beekamaa dha. Dararaa, hidhaa fi ajjeechaa uummata irratti raawwachuudhan sodaachisanii deegarsa argachuun fi jeequmsa keessatti filmaata geggeessuu yaaluun kuni daddaffiin yoo hin dhaabbanne balaa daran guddaa akka fidu beekamaa dha. Dantaa siyaasaa fi fedhii aangoorra turuuf jecha qaamni biyya bulchaan jira jedhee of waamu ummata Itophiyaa kees- sattuu sabootni cunqurfamoorra dararaa karaa adda addaa irraan gahaa akka jiru beekamaa dha. Kanaaf qaamni PP humnaan dirqisiisee deeggarsa argachuu yaaluun gochaa abbaa irruummaa waan ta’eef irraa dhaabbachuu akka qabu hubachiisuu feena.
Qaamni biyyan bulcha jedhee of waamu (PPn) filmaata fakkeessootiin (fake election) mootummaa abbaa irree mirkaneeffa- chuuf akka carraaqaa jiru ammumarraa ifa ta’aa jiraachuu isaa uummatni Itophiyaa fi hawaasni Adunyaa hubachuu qabu. Itti dabalees, haala jeequmsaa fi tasgabbii hin qabnee fi mormitootrni keessaa dhiibamanii mana hidhaa jiran keessatti filmaata humnaan dhiibanii gaggeessuuf yaaluun balaa kana caalaa guddaa akka fidu ammumarraa hubachuu feesisa.
Dhumarratti, haala rakkisaa kana keessatti ummatni Oromoo, lammiileen Oromiyaa fi Sabootni Cunqurfamoon kaan tokkummaan wal ijaartanii akka nageenya naannoo keessanii eeggattanii fi filmaata haqaa fi kan hunda hammateef akka of- qopheessitan dhaamsa keenya isinii dabarsina.
Adda Bilisummaa Oromoo,